Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 504581 times)
« Reply #790 on: January 15, 2012, 01:00:55 AM »
ကိုအိတ်ကြီးရဲ့ ဖုန်းကို ဒုံပတ်ခိုးရိုက်ထားတာ
« Reply #791 on: January 15, 2012, 01:02:02 AM »
တရုတ်စာသင်ရတာ လွယ်တာတော့ တော်တော်လွယ်သား
« Reply #792 on: January 16, 2012, 05:09:49 PM »
Bill Gate Coming to YANGON.
report and interview by TIME
Time : လူကြီးမင်း ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသွားချင်တာလဲ ခင်ဗျာ။
B Gate : ပိုပြီးကြီးပွားမည် အခွင့်အလမ်း ရှိမယ်လို ထင်မြင်မိလိုပါ၊
Time : ဘယ်အချက်တွေကိုများ ဆိုလိုပါသလဲ၊ သိခွင့်ရှိရင် ရှင်းပြပေးပါ။
B Gate : အဓိက ကတော့ နည်းပညာမျိုးစုံ သုံးစွဲတယ်ဆိုတော့ အင်အားကြီးတာပေါ့၊
ဥပမာ- dial up, ADSL, Broadband, Wi Max, EVDO, EDGE, Fiber Optic, MacWill စတဲ့ နည်းပညာတွေကို US 500 အထက်ပေးပြီး သုံးနိုင်တာတွေ့ရလိုပါ။
နောက်ပြီးတော့ TDMA, GSM, CDMA 450, 800 စတဲ့ နည်းပညာတွေကို US 1500 နဲ့ ၀ယ်သုံးတယ်ဆိုတာလည်း တွေ့ထားလိုပါ။
အဲဒီလောက်တန်ဖိုးကြီး အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို သုံးတဲ့နိုင်ငံကို Steve Job လို မရောက်ဘူးလိုက်မှာ စိုးလိုပါ။
Time : ဒါဆို ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဒီနည်းပညာတွေကိုသုံးစွဲမှပေါ့၊ ပြီးတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ Window OS ရဲ ရောင်းအားကိုကော မြှင့်တင့်မှာလား။
B Gate : ဟုတ်ကဲ့ သုံးစွဲမှာပါ၊ လိုအပ်ရင် ဒီလိုနည်းပညာအစုံရှိတဲ့ နေရာမှာ ရုံးထိုင်ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။
နောက်ပြီး Window OS ကတော့ ရောင်းခွင်ရှိမရှိ မေးမှာပါ၊ ဘာလိုလဲဆိုတော့ Window ဆိုတာ မြန်မာအသုံးအနှုန်းအရ တံခါး ဖြစ်နေတော့ သောခတ်ထားမှာ
Time : အခုလို ဖြေကြားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ခရီးစဉ် အပေါ် ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။
B Gate : ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းလဲ ရင်ခုန်နေပါတယ်၊ နည်းပညာအစုံ သုံးရမှာ ဆိုတော့လေ။
Credit to : .......................Florence Lwin
« Last Edit: January 16, 2012, 05:13:21 PM by ဖရာရှက် »
« Reply #793 on: March 08, 2012, 02:09:35 PM »
« Reply #794 on: March 08, 2012, 02:14:45 PM »
မေး : မိန်းကလေးတွေက ဘာလို့စကားများများပြောကြပါသလဲ?
ဖြေ : သူတို့မှာ နှုတ်ခမ်းက လေးခုတောင်ရှိတာကိုး
မေး : ယောက်ျားလေးတွေ တော်တော် တွေးတောကြတယ်နော်
ဖြေ : သူတို့မှာက ခေါင်းနှစ်ခေါင်းရှိတာကိုး
« Reply #795 on: March 09, 2012, 02:03:00 PM »
တစ်ခါက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ စူပါးမားကတ်ထဲမှာ ဈေးသွားဝယ်တယ်တဲ့။ သူဝယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့
သွားတိုက်ဆေး 1 ဘူးး
သွားပွတ်တံ 1 ချောင်း
အိမ်သာသုံး စက္ကူလိပ် 1 လိပ်
အအေးခံထားတဲ့ အသင့်စား ညစာထုပ် 1ထုပ်
အစာပြေဝါးစရာ ပေါက်ပေါက် 1ထုပ် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူက ငွေရှင်းဖို့သွားတော့ ကောင်တာက အမျိုးသမီးကပြောတယ် ..
“ အိုး .. ရှင်က လူပျိုလူလွတ် မဟုတ်လား ”
ဒီတော့ အဲဒီအမျိုးသားက ဇဝေဇဝါနဲ့ ပြန်ပြောတယ်။
“ ခင်ဗျား ဘယ်လိုများ ခန့်မှန်းမိတာလဲ .. ကျွန်တော့်် ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုချင်းစီပဲ ဝယ်လို့လား ”
ဒီမှာတင် ငွေရှင်းကောင်တာက အမျိုးသမီးလေးက ဘာပြောလိုက်လဲ ဆိုတော့ ..
“ မဟုတ်ပါဘူး .. ရှင်က ရုပ်ဆိုးလို့ပါ ” တဲ့လေ ....
ကြိုးစားတဲ့ ဟွန်နီလေးကို အားပေးနော် ..ဟေးး ကိုကို ..ဟေးးမောင်ရေ ...ဖတ်ပီးရင်လဲ ဗုတ်တွားအုံးလေကွယ် .... အာဘွားး ...
« Reply #796 on: March 09, 2012, 10:57:59 PM »
ဗန်းမော်ဆရာတော် ဆို တာ မြန်မာနိူင်ငံ ရဲ့သာသနာသမိုင်းမှာ အလွန် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် ငယ်စဉ်အခါ ကိုရင် ဘ၀ က
သီလရှင် တစ်ပါး ကို စိတ်ဝင်စားမိလို့ရိသဲ့သဲ့ စ နောက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဗန်းမော်ဆရာတော် ရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီး ရှင်ဘုရင် ကတောင် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရတဲ့ အထင်ကရ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်လာချိန်မှာ ဆရာတော် ငယ်စဉ်အခါ စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးတဲ့ သီလရှင် မယ်ကင်း ကလဲ သီလရှင်တွေ ကိုစာချ စာပြ ရတဲ့ သီလရှင်ဆရာကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ငယ်စဉ် ဘ၀ကတည်းက တပါးနဲ့ တပါး ကိုယ်ဦးကိုယ်ဆော် သူဦးသူဆော် (စကား နိူင်လုတာပြောပါတယ်) နဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာ အသက်တွေ ရ လာတဲ့အထိ ပဲပေါ့.။
တနေ့ တော့ ဗန်းမော်ဆရာတော် က မင်းကြီး ရဲ့ နန်းတော်က ဆွမ်းစားပင့်လို့ ဆွမ်းစားအကြွ မှာ လမ်းခုလပ်တနေရာမှာ သီလရှင် မယ်ကင်း နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် တည့်တည့်တိုး ပါတော့တယ် ။မယ်ကင်း ဟာ ဗန်းမော်ဆရာတော် ကို စကားအရာနဲ့ သာ ရန်စောင်လေ့ရှိပေမယ့် သံဃာတော် ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး အနေနဲ့အရိုအသေ မပျက်စေရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခုလည်း မယ်ကင်း ဟာ လမ်းဘေးကိုဖယ်ပေးပြီး လက်အုပ်လေးချီကာ ( စိတ်ထဲကတော့ တွယ်လိုက်ဦး မဟ ဆိုပြီး) ဒီလို စာချိုးလေးနဲ့လျှောက်လိုက်ပါတယ် '' နှစ်စေ့ တစ်ချောင်း အရှင်ကောင်း ဘယ်လမ်းကြောင်းက ကြွမည်နည်း '' ဒီအခါ ဗန်းမော်ဆရာတော် က လည်း အင်မတန် ထက်မြက်သူမို့ချက်ချင်းပဲ ပြန်ပြော လိုက်ပုံက '' နှစ်ခြမ်း တစ်စေ့ လမ်းကိုကြည့် နန်းတော် အထိကြွမလို့'' ဆိုပြီး ပြန်တွယ်လိုက်တာ သီလရှင် မယ်ကင်း လဲ ဘာမှပြန်မပြောနှူိင်တော့ပဲ ခပ်သုတ်သုတ် ထွက်သွားပါလေရောတဲ့
« Reply #797 on: March 19, 2012, 12:25:25 PM »
« Reply #798 on: April 10, 2012, 08:34:47 PM »
ဓါတ်ငွေ့သိုက်ကြီးဖင်ခုထိုင်..(ဖယောင်းတိုင်လေးမှာ … မှိတ်တုပ်…မှိတ်တုပ်)
ပိုလျှံနေလို့ .. ရောင်းတာပါ…..(ပြောတတ်လိုက်တာ..သူ့ပါးစပ်ကြီး)၂
ဟေ့ ... စိန်လား…ဟေ့…ရွှေလား....
« Reply #799 on: April 17, 2012, 07:52:48 PM »
ဘဏ်တစ်ခုကို အဘွားကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ ပေါင်တစ်သန်းအပ်ဖို့ ဘဏ်သူဌေးကိုပြောတယ်။
ဘဏ်သူဌေး ။ ။ ဒီလောက်များတဲ့ငွေတွေ ဘယ်လိုရှာလာခဲ့တာပါလဲ။
အဘွားကြီး ။ ။ ငါက အလောင်းအစားနဲ့အကျိုးပေးတယ်လေ။ အဲဒီလို ရှာလာတာ ....
ဘဏ်သူဌေး ။ ။ မဖြစ်နိုင်တာပဲ။
အဘွားကြီး ။ ။ဒါဖြင့် မနက်ဖြန်မင်းတင်ပါးမှာ တက်တူးထိုးပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာကို ပေါင်တစ်သောင်းကြေးလောင်းမလား။
ဘဏ်သူဌေး ။ ။ ဟာဗျာ..ကျွန်တော့်တင်ပါးမှာ ဘာလို့တက်တူးထိုးရမှာလဲ။ လောင်းရင် ကျွန်တော်ပဲအချောင်ပေါင်တစ်သောင်းရနေမှာပေါ့။ အလကားမလိုချင်ပါဘူး။
အဘွားကြီး ။ ။ မလောင်းဘူးဆိုရင် မင်းဘဏ်မှာ ငါ့ငွေတွေမအပ်တော့ဘူး။
ဘဏ်သူဌေး ။ ။ ကဲ..ဒီလိုဆိုရင်လည်း လောင်းမယ်ဗျာ။
အဘွားကြီး ။ ။ အိုကေ..သဘက်ခါ ရှေ့နေနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူ ငါပြန်လာခဲ့မယ်။
ကြားရက်တွေထဲမှာ သူဌေးကသဘောကျပြီး တပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့။ တင်ပါးမှာ ဘာတက်တူးမှထိုးစရာမလိုဘူး။ ဒီအဘွားကြီး ဒီတစ်ခါတော့ရှုံးပေါက်ပဲ။
ပေါင်တစ်သောင်း အလကားသက်သက်ပေးချင်လို့လာလောင်းတာဆိုပြီး တွေးနေတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ရောက်တော့ အဘွားကြီးက လူနှစ်ယောက်နဲ့ရောက်လာတယ်။
သက်သေပြဖို့ အဘွားကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ ဘဏ်သူဌေးက ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ပြတယ်။
ဘဏ်သူဌေး ။ ။ ဟဲဟဲ..အဘွားရေ..အဘွားရှုံးပြီနော်။ တစ်သောင်းလေးမစပါဦး။
အဘွားကြီး ။ ။ အေး...ရော့...ဒီမှာ တစ်သောင်း။
ပါလာတဲ့လူထဲကတစ်ယောက်က မေ့လဲမလိုဖြစ်နေလို့ ဘဏ်သူဌေးက အဘွားကြီးကိုမေးတယ်။
ဘဏ်သူဌေး ။ ။ အဲဒီတစ်ယောက်က နေမကောင်းလို့လား။
အဘွားကြီး ။ ။ သြော်..ဒီလူလား..အရှုံးသမားလေ။ ဘဏ်သူဌေးဖင်လှန်ပြမယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးဆိုလို့ ပေါင်တစ်သိန်းကြေးလောင်းထားတာ အခုသူရှုံးပြီလေ….